“ ပုံမှန်” Porn စောင့်ကြည့်ခြင်းသည်သင်၏လူကြီးမင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ လိင်စိတ်ပညာရှင် Maryline Décarie၊ MA - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က porn
သင့်ရဲ့ယောက်ျားပီထိခိုက်အကဲခတ် "Normal" ကို Porn ဖြစ်သနည်း sexologist Maryline Décarie, MA အားဖြင့်
သင့်ရဲ့ယောက်ျားပီထိခိုက်အကဲခတ် "Normal" ကို Porn ဖြစ်သနည်း
ကျွန်ုပ်ဖောက်သည်များနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်သည် အမျိုးသားများအနေဖြင့်လိင်စိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတိုင်ကြားမှုများ၊ နှောင့်နှေးခြင်း (သို့) လျော့နည်းခြင်းမရှိခြင်းနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကိုငါပထမ ဦး ဆုံးမေးကြည့်တာကတော့သူတို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုပုံမှန်ကြည့်တာလားမကြည့်တာလား၊
porn စွဲ အခုအချိန်မှာယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြinနာမှာစကားလုံးဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်ပြီးမကြာခဏငါ nomenclature ပြaနာတက်တယ်။ ၎င်းကိုစွဲလမ်းမှုဟုခေါ်ဆိုခြင်းသည်၎င်းကိုစွဲလမ်းမှုပုံစံဖြင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထသည်သင်၏လူမှုရေးဘဝအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ မင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးလား သင်၏အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်? သင့်ရဲ့ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေ? ဥပဒေရေးရာပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေ? အကယ်၍ သင်သည်ဤမေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုထက်ပိုသောအဖြေကိုသင်ဖြေဆိုပါကသင်၌စွဲလမ်းမှုသည်သင်၌ရှိသည်။
ဒီရှုထောင့်နဲ့ငါ့ပြဿနာကသင့်ကိုသင်အထက်မဆို impact မသင့်သောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကို "ပုံမှန်" အဆငျ့ရှိလျှင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်
ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထသည်သင်၏လိင်ကိုထိခိုက်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်“ မင်းမှာပြProbleနာရှိသလား” စိစစ်မေးခွန်းလွှာ
သငျသညျ masturbate ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏအရင်ကထက်ထှတျအထိပျရှာရမလဲ?
သငျသညျမှာအားလုံး orgasm မနိုင်သည့်အခါကြိမ်ရှိပါသလား
သင်ထှတျအထိပျကိုကူညီလိင်စဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌ညစ်ညမ်းပုံရိပ် play သလား?
လိင် porn မှ masturbating သကဲ့သို့စိတ်ကျေနပ်စရာမဖက်အတူဖြစ်သနည်း
သငျသညျဖြေကြားခဲ့လျှင် ဟုတ်ကဲ့ အထက်ပါမေးခွန်းအချို့အတွက်၊ သင်၏ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းသည်သင်၏လိင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို desensitization ဟုခေါ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်တစ်ကိုယ်တည်းအနေဖြင့်အသုံးပြုလေလေ၊ အစစ်အမှန်ဘဝဖြစ်ရပ်များသည်သင့်လျော်သောနှိုးဆွမှုအဆင့်များကိုထုတ်ယူနိုင်လေသည်။
ဒါဆိုမင်းဘာလုပ်လဲ အောင်မြင်သောအစီအစဉ်တစ်ခုအရအမျိုးသားများသည်လိင်ဆိုင်ရာအထွတ်အထိပ်အားလုံးကိုရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာအောင်ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းလုံးဝမရှိပါ။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အား၎င်း၏မူလစံနှုန်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်အချိန်ပေးသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကပြောတာကပိုပြီးလွယ်ကူပေမယ့်သတင်းအချက်အလက်၊ အထောက်အပံ့၊ အကြံပေးခြင်းနဲ့စွမ်းအားတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သက်သေခံတော်မူချက်.